RASMI: Chelsea Oo Iska Baxday Tartanka Super League & Finalka Champions League Oo Ay PSG Ku Ballamayaan - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaRASMI: Chelsea Oo Iska Baxday Tartanka Super League & Finalka Champions League Oo Ay PSG Ku Ballamayaan
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa iskaga baxday tartanka European Super League ee muranka badan dhaliyey, kaddib dhalleecayn badan oo ka timid taageereyaasha kubadda cagta, xidhiidhada ciyaaraha kala duwan iyo khubrada kale ee ciyaaruhuba.
12 kooxood oo waaweyn oo Yurub ah ayaa Axaddii shaaciyey in ay samaysanayaan tartanka Super League oo ay ka qayb-gelayaan 20 kooxood, waxaana markiiba dhashay buuq iyo sawaxan meel kastaba kasoo yeedhay oo lagaga dayrinayo tartankan oo saamayn ku yeelanaya kubadda cagta, isla markaana burburinaya horyaallada iyo xataa Champions League.
Lixda kooxood ee waaweyn ee Ingiriiska ee Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal iyo Tottenham ayaa qayb ka ah 12ka kooxood ee wada samaystay tartankan, waxaana soo raacay kooxaha Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Inter Milan, Juventus iyo AC Milan.
Saddexda kooxood ee PSG, Bayern Munich iyo Borussia Dortmund oo markii hore qayb ka ahaa ayaa ugu dambayntii bannaanka ka istaagay tartankan, iyagoo sheegay in aanay ka mid noqonayn, taas oo keentay in 12 kooxood oo kali ah ay noqdaan halkii laga filayay in 15 kooxood ay noqdaan aas-aaseyaashu.
Sida uu ku warramay wariyaha Sky Sports ee Kaveh Solhekol oo looga dambeeyo xogaha ciyaaraha, Chelsea ayaa ka baxsaday tartanka European Super League ee Axaddii ay sida rasmiga ah u shaacisay in ay qaybta ka tahay.
Wariyuhu wuxuu sheegay in saacado gudahood ay waqti kooban kaddib ay kooxdu si rasmi ah u shaacin doonto in ay tartankaas ka baxayso oo aanay qayb ka noqonayn, kaddib gadoodka taageereyaasheeda iyo kuwa kale ee kooxaha Yurub.
Fiidnimadii hore ee caawa, ayaanu akhristeyaasha usoo gudbinay xogta sheegaysa in koox Ingiriis ah ay kulan degdeg ah ku jirto oo ay ka baxayso Super League, laakiin waqtigaas waxa qarsoodi ahaa magaca kooxda, iyadoo ugu dambayntiina ay Chelsea noqotay.
Chelsea ayaa noqonaysa kooxdii ugu horreysay ee tartankan ka baxda, waxaana jira culays kale oo saaran kooxaha kale ee Ingiriiska oo ciyaartoygoodu ay ka hor yimaaddeen, taas oo keeni karta in iyaguna ay iskaga baxaan, iyadoo haddii ay dhacdana uu fashilmayo tartanka Super League ee muddada sannadka ah laga shaqaynayay hirgelintiisa.
Chelsea ayaa go’aankeedu soo baxay laba maalmood ka hor kulanka UEFA ee Jimcaha kaas oo la sheegayo in ay suurtogal tahay in ay kasoo baxaan go’aamo tartanka Champions League lagaga caydhinayo kooxaha qaybta ka ah Super League.
Haddii UEFA ay ganaax kusoo noqto kooxaha kusii adkaysta in ay ka mid ahaanayaan tartanka Super League, waxay taasi ka dhignaan foontaa in finalka Champions League ay wada ciyaaraan PSG iyo Chelsea.